मैले निकै सोचविचार गरेर कप्तानी छाड्ने निर्णय गरेको हुँ । नेपाली क्रिकेट पारस खड्काको कप्तानीपछि मात्रै सुरु भएको होइन । एउटा व्यक्तिमा कोही पनि अड्किन हुँदैन ।
क्यानले निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । तपाईं फिर्ता हुनु होला ?
मैले निकै सोचविचार गरेर कप्‍तानी छाड्ने निर्णय गरेको हुँ । नेपाली क्रिकेट पारस खड्काको कप्‍तानीपछि मात्रै सुरु भएको होइन । एउटा व्यक्तिमा कोही पनि अड्किन हुँदैन । मैले इमानदार भएर कप्‍तानको जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ । अब आउनेले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । म मेरो निर्णयमा अडिग छु । नेपाली टिमको कप्‍तानका रूपमा फर्किन्नँ ।
क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा भएलगत्तै राजीनामा आयो नि ?
नेपालको क्रिकेट क्यानको निलम्बनसँगै अड्किएको अवस्थामा थियो । हामी कहीँ-कतै पनि अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थियौँ । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रदर्शनबाट मात्रै नेपाली क्रिकेट माथि उकासिने अवस्था थिएन । त्यस्तोमा मैले क्रिकेट र कप्‍तानीबाट विश्राम लिने अवस्था हुन्थ्योजस्तो मलाई लागेन । क्यानमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । निलम्बन पनि फुकुवा भएको छ । अब उहाँहरूले नयाँ सोचबाट अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि मैले बाटो खोलिदिएको मात्रै हुँ । विश्राम लिनुपर्छ भन्ने मनमा त लागिरहेको थियो । म क्यान निलम्बन फुकुवाको दिन कुरेर बसेको थिएँ ।
क्यान पदाधिकारीले पारसको राजीनामाले नेपाली क्रिकेटको आन्तरिक विवाद समाधान नभएको सन्देश गयो भनेका छन् । तपाईं त्यो मान्नुहुन्छ ?
कुरालाई जहाँ जसरी मोडे पनि हुन्छ । आन्तरिक विवाद भनेको के हो ? उहाँहरूको पूरै प्यानल नै निर्वाचित भएर आएको छ । यसमा कहाँ विवाद छ ? राजीनामा नितान्त मेरो व्यक्तिगत निर्णय हो । यसबाट उहाँहरूलाई कसरी अप्ठेरो पर्न गयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।
कप्‍तानी मात्रै छाडेको हो कि क्रिकेटबाट पनि विश्राम लिनुभएको ?
अहिलेलाई चाहिँ कप्‍तानीबाट राजीनामा गरेको हुँ । केही समय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट पनि विश्राम लिने योजना छ किनभने अब अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि धेरै छैनन् । अब राष्ट्रिय टोली कसरी बन्छ भन्नेमा पनि धेरै कुरा निर्भर गर्छ । घरेलु क्रिकेटमा त सक्रिय नै रहन्छु । भर्खर ३२ वर्षको हुँदै छु, ४०-४५ वर्षसम्म क्रिकेट खेल्ने योजना छ । कुनै न कुनै रूपमा म नेपाली क्रिकेटसँगै जोडिइरहन्छु । क्रिकेटभन्दा पर त म कहिले पनि छैन र हुन्नँ । हुन सक्छ, म अब खेलाडीभन्दा अर्को रूपमा पनि आउन सक्छु ।
प्रशिक्षक बन्ने योजना त छैन नि ?
एउटा सफल खेलाडी प्रशिक्षक हुनुपर्छ भन्ने छैन । मैले आफूलाई खेलाडीका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्दै आएको छु । प्रशिक्षण दिने कुरामा म त्यति कम्फर्टेवल फिल गर्दिनँ । राम्रो क्याप्टेन भएँ भन्दैमा राम्रो कोच हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको क्रिकेट प्रशासन हो । भविष्य कसले देखेको छ र ? अरू केहीमा सफल भइएन भने प्रशिक्षणमा पनि आउन सक्छु ।
क्यानको नेतृत्वमा आउने वा व्यवस्थापनमा लाग्ने ?
क्रिकेटको व्यवस्थापनमा आउने मेरो योजना मात्रै हैन, रुचि पनि हो । गत वर्ष हामीले पोखरा पि्रमियर लिग गर्‍यौँ । अहिले वुमन्स च्याम्पियन्स लिग आयोजना गरिरहेका छौँ । क्रिकेटको व्यवस्थापनमा आउनैपर्छ । यहाँ आएर नेपाली क्रिकेटलाई अघि बढाउन सकिन्छ । मैले जीवनमा जानेको क्रिकेटभन्दा अर्थोक केही छैन । त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा क्रिकेटको प्रशासनिक क्षेत्रमा लाग्ने योजना छ । हेर्दै जाऔँ, के हुन्छ ।
क्यानले अहिले नै कुनै पदीय दायित्वमा अफर गर्‍यो भने बहन गर्ने ?
अहिले नै म त्यसका लागि मानसिक रूपमा तयार भइसकेको छैन । केही समय क्रिकेट व्यवस्थापकका रूपमा काम गर्छु । म केही समय विश्राम लिन चाहन्छु । खेल जीवन नै त्यागेको हैन । पहिले खेलमै फोकस हुन्छु । पछि मात्रै अन्य पदीय दायित्वका बारेमा सोचूँला ।
क्यानको वर्तमान नेतृत्वबारे तपाईंको धारणा ?
एउटा खेलाडीका रूपमा क्यानमा को आयो, को आएन भन्नेमा मेरो त्यति धेरै चासो र चिन्ता छैन । व्यक्तिबारे म कहिल्यै पनि धारणा बनाउँदिनँ । जो आए पनि नेपाली क्रिकेट अघि बढाउन संस्थागत प्रयास हुनुपर्छ । मैदानबाहिर उहाँहरू हुनुहुन्छ । मैदानभित्र हामी छौँ । सबै मिलेर अघि बढ्ने हो । क्यानले आवश्यक ठाने वा मैले जानेको विषयबारे सुझाव दिने कुरामा म पछि हट्दिनँ । क्यानमा नयाँ व्यक्तिभन्दा पनि सोच नयाँ हुनुपर्छ र त्यसको केन्द्रमा नेपाली क्रिकेटको विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्रै हो, मेरो ।
तपाईंको उत्तराधिकारी को देख्नुहुन्छ त ?
अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने ज्ञानेन्द्र मल्ल नयाँ कप्‍तानका लागि उपयुक्त हुन्छजस्तो लाग्छ । टिममा ऊ सिनियर खेलाडी पनि हो । १० वर्षसम्म ऊ टोलीको उपकप्‍तान रह्यो । टिमवर्कलाई अघि बढाउन सक्ने व्यक्ति हो, ज्ञानेन्द्र । त्यसैले कम्तीमा १ वर्ष नेपाली टोलीको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रलाई दिइयो भने न्याय हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : कुबेलाको बहिर्गमन